Solombavambahoaka – Politika
Étiquette : <span>Solombavambahoaka</span>
Fanao mendrika ho an’ny Parlemantera : ohatra 8 fahita maneran-tany
Toy ny ahoana ny fomba fifandaminana anatin’ny parlemanta maneran-tany ? Inona no mety hanentana ny olom-boafidy hifandray ? Indro aroso etoana, ohatra valo mety hiteraka fomba fijery vaovao eo anivon’ny antenimierampirenena malagasy. Parlemanta roandey : laharam-pahamehana ny vehivavy Miavaka amin’ny firenena maneran-tany i Rwanda izay entin’i Paul Kagame noho ny toerana manokana omen’izy ireo ny...
Hatramin’ny taona 60 no mankaty, dia lasa anjorombala ka tsy mba nisitraka asa fanatsarana na fanavaozana ny lapan’ny demokrasia eny Tsimbazaza, izay foiben’ny antenimierampirenena eto Madagasikara. « Zara raha nisy ny fampitaovana sy kojakoja kely madinidinika nielina, fa ny fanavaozana marina dia mbola any an-kibon’ny omby hatramin’ny Repoblika voalohany, fotoana niorenany », hoy ny fanazavan-dRambeloson Toky, talen’ny...
Antenimierampirenena, mahazo laka ny haizina !
Andrimpanjakana voalohany tokony ho fitaratry ny mangarahara ny antenimierampirenena. Mbola mijanona ho tompon-trano mihono anefa ny vahoaka hatreto, na ny mikasika ireo parlemantera mandrafitra izany na ny zava-mitranga marina eo anivony. mifandray amin’ny olona nofidiny hisolontena azy ve ny vahoaka ? Amin’ny alalan’ny inona ? Manao ahoana ny fomba ikirakirain’izy ireo ny volavola sy ny tolo-dalàna...
Tafatafa tamin’ny Profesora Jeannot Rasoloarison
« Tokony ho teren’ny antokony hanatrika fivoriana ireo solombavambahoaka » Vavolombelon’ny tantaram-pirenena malagasy izy ary iray amin’ireo mpampianatra izany, indrindra ny mikasika ny politika. Ahoana ny fomba hahazoana manamarina ny fitozoana mankamin’ny fametrahana antenimiera mpanara-maso tokana na anankiroa ? Miankina amin’ny tanjona kendrena izany. Nandritra ny Repoblika faharoa, ny antenimiera mpanara-maso tokana dia nataon’ny Filoha Ratsiraka...